သင်ခန်းစာ: Loop ဖိုင်စနစ်များ Linux မှ
သင်ခန်းစာ: Loop ဖိုင်စနစ်များ
အိုင်ဗင် | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
2.1 1- Mount.iso ဖိုင်များ
3 2- ဖတ်ရန်သာ squashfs
4 3- «အရေးပေါ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်»
6 Related Links များ
Gnu / Linux (နှင့်အများစုတွင် unix စနစ်များ) တွင်ဖိုင်တစ်ခု (ယခင်ကပုံစံချထားခဲ့သည်) ကို hard disk တစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ယန္တရားတစ်ခုရှိသည်။ ဤသည် (ငါ့ကိုလုပ်) ဒီ crappy ပုံကဒီယန္တရားအလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းပြသည်။
1- Mount.iso ဖိုင်များ
.iso ဖိုင်များသည်စီဒီများနှင့်ဒီဗီဒီများ၌အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည်။ file system ဖြစ်နိုင်သည့် loop file တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ISO ကို 9960 (CD များပေါ်တွင်ပိုမိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်) သို့မဟုတ် UDF (ဒီဗီဒီတွင်အသုံးအများဆုံး) ။ အဲဒါကို mount လုပ်ဖို့ကျနော်တို့ mount command ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
mkdir iso # လမ်းညွှန်ဖန်တီးပါ chmod -R 666 iso # အသုံးပြုသူများအားလုံးခွင့်ပြုချက်ကိုဖတ်ရန်ခွင့်ပေးပါ image.iso iso / # iso image ကို mount (root လိုအပ်သည်) mount
2- ဖတ်ရန်သာ squashfs
ကျွန်တော်တို့မှာပုံရိပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွဲများကိုသူရိုက်ကူးသည့်နှစ်နှင့်အညီစီစဉ်ထားသည်ဆိုပါစို့။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က၊ ကျွန်တော်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထဲကဖိုလ်ဒါတွေထဲမှာပါတဲ့ဒေတာကိုပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီမှာ Squashfs ရောက်လာတယ်။ Squashfs သည်ဖတ်နိုင်မှသာ compressed filesystem ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အတွင်းဒေတာကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့်မသာ ကျနော်တို့အာကာသ၏ကြီးမားသောပမာဏကိုကယ်တင်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းစပ်စုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရလိမ့်မည် ဖိုင်များ၏စာဖတ်ခြင်းပိုမိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ်ဖိုင်ငယ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို decompress လုပ်ခြင်းသည် CPUs အများစုအတွက်အနည်းဆုံးအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိဒါန်းမှထွက်ခွာရန် squashfs ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးရန် syntax ရိုးရှင်းသော mksquashfs command ကိုအသုံးပြုရမည်။
ကောင်းပြီ၊ ရွေးချယ်ထားသော algorithm သည် xz ဖြစ်သည် ပိုမိုမြင့်မားချုံ့အချိုး ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ကွက်အရွယ်အစားသည်အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ဘာ ပိုကောင်းတဲ့ချုံ့ရလဒ်များကိုဘို့ခွင့်ပြုပါတယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့က 64KiB ဖြစ်ကြသည်) ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် mount နိုင်ရမည်။
OS ကိုစတင်သောအခါ၎င်းကိုတပ်ဆင်လိုပါက / etc / fstab သို့ဤစတိုင်မျဉ်းကိုထည့်ရမည်။
မမှန်ကန်သောအချက်အလက်များကို / etc / fstab ဖိုင်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်စနစ်သည် boot တက်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။ အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် command ကိုသုံးနိုင်သည် -a
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်များပေါင်းထည့်သို့မဟုတ်ဖျက်လိုပါကသို့မဟုတ်ဤလျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များကိုထုတ်ယူသောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာ command ရှိတယ် မင်္ဂလာပါ.
ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ထုတ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်အဖြစ် "squashfs-root" ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ -d option နဲ့အတူပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်
ဤဥပမာအပြင် squashfs ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် (hibernation, ကြီးမားတဲ့ compilations ... ) အတွက်သင်အပိုဆောင်းလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်လိုအပ်သည်ဆိုပါစို့။ ကွင်းဆက်ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်သောနေရာဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအချည်းနှီးသောဖိုင်ကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောပမာဏရှိသောပမာဏနှင့်၎င်းကို command နှင့်ပြုလုပ်သည်။ ရက်:
လက်ျာလက်၌ dd သည်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ထားသည့်မျောက်ထက်ပိုဆိုးသည်။ Enter မနှိပ်မီစဉ်းစားပါ
ဤကိစ္စတွင်လုပ်ကွက်သည် MiB တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 512MiB ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဒီလမ်းဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဤ command ဖြင့် swap ကိုဖန်တီးပြီးသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်
သတိထားရမည်မှာ loop file တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်တကယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
ဤရွေ့ကားအချို့သောအထူးခြားဆုံးဥပမာများသာဖြစ်သည်။ chroots၊ encryption systems, nested loops များနှင့်လွတ်လပ်စွာစမ်းသပ်လေ့လာနိုင်သည်။ သင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်အသုံးပြုတဲ့ command တွေကိုသတိထားပါ။ Enter မနှိပ်မီဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ.
Related Links များ
က Man unsquashfs
iso 9960 ဝီကီပီးဒီးယား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သင်ခန်းစာ: Loop ဖိုင်စနစ်များ
ကောင်းသော post ကို che !! ငါ့မှာကြီးမားတဲ့ Backup တွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုငါချုံ့ဖို့ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါဒါကိုသုံးမယ်၊ ပြင်ပစာဝှက်တဲ့နည်းနဲ့အဲဒါကိုဖြည့်တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုစာဝှက်တော့မယ်ဆိုတာသတိရတယ်🙁
Manuel R ကို ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာကောင်းကောင်းရတယ်၊ dd နဲ့အတူ img ဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာငါဖတ်ပြီး mount လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် Squashfs နဲ့ဘယ်လို compression လုပ်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသော်လည်း၎င်းသည်သင်မှတ်ချက်ပေးသည့်ကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဝေမျှမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Manuel R ကိုပြန်ပြောပါ
ပျော်စရာကောင်းတယ်၊ squashfs နဲ့သူတို့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပုံတွေကိုချုံ့တာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tuto !!! =) ... အလွန်ကောင်းသောအစွန်အဖျား !!!
မင်္ဂလာပါ Roader အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး, မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gentoo မှာမဖြည့်ခင် kernel ထဲမှာ SquashFS အထောက်အပံ့ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ငါစမ်းသပ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့ typo, လမ်းပြပြင်ဆင်ပါ။
mksquashfs ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၀၉ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၀ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၁ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၂ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၃ ဓာတ်ပုံများ_2009-2010.sqsfs -comp xz -bs 2011M
"-bs" (ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အရွယ်အစားကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသော) တွင်ရှိသည့် s ကိုзапасပါ။
mksquashfs ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၀၉ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၀ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၁ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၂ ဓာတ်ပုံများ - ၂၀၁၃ ဓာတ်ပုံများ_2009-2010.sqsfs -comp xz -b 2011M
မည်သည့် GNU / Linux ဖြန့်ချီမှုတွင်မဆို MTP [Android] အထောက်အပံ့။
ဖိုင်များကို Gmail (ဂျီမေးလ်) ထဲမှဂူဂဲလ်ဒရိုက်မှပူးတွဲပါ